War Deg Deg Daawo Video::Beesha Jaamac Siyaad’Muusow ilaahay Hada Taqaano Kala Bax Ciidankaga Laascaanood’ | khaatumonews
War Deg Deg Daawo Video::Beesha Jaamac Siyaad’Muusow ilaahay Hada Taqaano Kala Bax Ciidankaga Laascaanood’
May 22, 2018 - 17 Aragtiyood
Waxaa Magaalada laascaanood caasimada gobolka sool ku yeeshay shir balaadhan beelweynta jaamac Siyaad dhulbahante oo ka hadashay xaalada laascaanood iyo dagaalada u dhexeeya jeegaanta iyo hartiga.
Odayaasha jaamac siyaad ayaa iska fogeeyay godobta iyo sawirka kaare la sheegay in lagu qabtay dagaalkii tukaraq oo maleeshiyaad beesha kamid ah ay isku sawiren.
Sidoo kale odayaasha ayaa maamulka muuse biixi ugu baaqay in gobolka sool isaga baxaan si dagdag ah.
Waa nasiibdarro in Camey dagaal geliyo ciidanka Puntland ayado madaxweyne Cabdiweli Gaas ku maqanyahay Muqdisho. Waa tan kentay jabkeena.
Camey waxa isku deyay inqilaab uu xukunka ka inqilaabayo madaxweyne Gaas laakiin waa fashilmay. Camey ha ka baxo Puntland si degdegah.
Waar raali iyo nus baan ka nahay inuu camay baad tiriye ina cagalule na dagaal galiyo adeer Hartigii waa israacay illaahay mooyi cid waabinkartaana ma jirto
libaaax hadalkaaga wa iso jiiray inder
Hooyadaa iyo iidoorkii ku dhalay was meeshaad gelilaheed baa lagaa rabaa .
Ma kooxda inqilaabka tageersan ayaa tahay? Camay waa jajuus uu shaqeeya Muqdisho asagana sabab uu ah jabka gaaray ciidanka Puntland.
Boqol iyo toban askar(110) ayaa inooga dhintay dagaalka maalinta hore, 80 waa dhaawac. Waxaas dhan Camay ayaa ka masuul ah ciidanka dagaal geliyay amar laan.
Cabdiweli Gaas ayaa Puntland madaxweyne ka ah. Camay inqilaabka fashilmay ragga kula jidhay ayaa hadeerto la baarahaya.
Camey xilkiisa garan waayay.
Madaxweynaha Puntland waa Cabdiweli Gaas mana ahaan in Camay ka amarqaato Muqdisho si loo burbursho Puntland.
Camay waa qaainul-wadan, Puntland ayaa duminahaya isago uu adeegahaya mooryanta Muqdisho.
Adigu hooyadaa iyo Majeerteenba was ee ma runtaad ninka ku caayeeysaa.
Waa Hadal Nin wayiin isaaq Nin loodigey lama khayaanayiin Dhexdaad Harti u gasheen dhinac kasta waa layiidibka xigaa Somalinimo iyo Muslim nimo hadii wadada laydiin furay wiilashiina la noqda meel aad martaan intaydin beri waayin
Waa Hadal Nin wayiin isaaq Nin loodigey lama khayaanayiin Dhexdaad Harti u gasheen dhinac kasta waa layiidika xigaa Somalinimo iyo Muslim nimo hadii wadada laydiin furay wiilashiina la noqda meel aad martaan intaydin beri waayin
Waar sida ragga u hadal oo wax iska celiya Majeerteerteenoow mar haddii aad diideen labdiinii gobol ee uraayey.
Waar Nimanku colaad xumaa. waarmiyiina ogayn In Sheekh Isaaq iyo sheekh Daarood Ilmo adeer yihiin oo ayisku agxabaalanyihiin? Waliba idinkay Afrikaaku reerabti idinyihiine sheekh isaaq waaqureesh asal ah.Waarbaantuugan iyo oromadan inagaaiskaxignee Bahasha qaboojiya
dahir waa sidaa nacasnimadooda iidoor baanu nhay idinkuna dhulbahante iyo hartiga kale waa sheekada kuwa doqmaha ah ku kaxaystaan laakiin game kaas waa kudaayey
Ilaahow tolkayow jaamac siyaad noo soo celi waa ramadaane harti iyo dhulbahante sheydaankii gaabnaa ilaahay baa ka dhex saaray ilaahow waa mahadaa berina barkad baa hadli doona oo gaabow udayriya sheydaanka baashe iyo kuwa lagaraaco iyaga war maleh nimanku way jabayaane hubka ka furta
Alla reerkan daaroodku yiciis Sanaa waar muse biixi sool baa doratay xagee adinka laydinku doortay waa in sidagdaga bolisku jeelka loogu taxaabaa buurmadow iyo cunaye liinta halacabaane halaga baxo kuye ma hoyadiin ayaanle dhulka dhulku miyaanu dhul somaliland ah ahayn idinkaa bixidoona sidii garaag saleebaan
meeshu waa dawlad waa in la soo xidhaa
Beesha dhan ee Jaamac Siyaad ee Somailand labadan nin wasiiraa caayey ka cadheeysani ma matali karaan.
Omar baryo way dhamaatay rati ratina socaayo awodaydaan ku dhextegay ee yaan duufaanku ku qaadin NO CALAA CAL